ညီမလေး ရေးတဲ့ အမေ့အကြောင်း….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ညီမလေး ရေးတဲ့ အမေ့အကြောင်း…..
ညီမလေး ရေးတဲ့ အမေ့အကြောင်း…..
Posted by lone on Sep 26, 2011 in Creative Writing, Poetry | 10 comments
ဒီကဗျာလေးက lone ညီမလေး ၈ တန်းကျောင်းသူအရွယ်တုန်းက ရေးထား
တဲ့ကဗျာလေးပါ။ ဒီကဗျာလေးကို စာရေးဆရာကြီးဦးစိမ်းနီက ကြိုက်လို့ဆိုပြီး…
အင်္လကာဝတ်ရည် MAGAZINE မှာ ထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်… ညီမလေးက အခု
၁၀ တန်းဆိုတော့ … သူ ၁၀ တန်းဖြေပြီးမှ Mandalay Gazette မှာ စာလာရေး
ဖို့ပြောရဦးမယ်……. ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့လည်း အားပေးကြပါဦးနော်…..
“ သူတို့တွေ အရွယ်ရောက်လာရင်” ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတွေ
ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ အမေဟာ ငါတို့ကို
“ ငါ့သားသမီးတွေ ကြီးလာရင်ငါ့ကို
ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မှာ” ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ပဲ
အဲဒါကြောင့် ငါတို့အမေကို ငါတို့အရမ်းချစ်ရမယ်….
သမီးလေး လုံး၊ ဦးကြောင် ဒီပို့စ်လေးကိုဖတ်ပြီး လွန်စွာခံစား ရပါတယ်ကွယ်။ ဦးဦးမှာလည်း အရင်က သမီးအရွယ် ညီမလေးတွေ ရှိခဲ့လို့ ပိုပြီးလွမ်းဆွတ်တသ ဖြစ်မိတယ်။ ဦးကြောင်က clean single ဆိုတော့ (သန့်ရှင်းတဲ့စင်ဂယ်လ်ဆိုတာ လုံးဝလူပျိုလူလွတ်၊ ရည်းစားသနာ အိမ်ထောင်မရှိ၊ ရည်းစားထားခွင့် အိမ်ထောင်ပြုခွင့်ရှိသူ၊ လွတ်လပ်စွာချစ်ခွင့်ရှိသူ၊ ရှာလည်းရှာနေသူ) သမီးလေးတို့လို နုပျိုလွတ်လပ်သူတွေနဲ့ ခံစားချက်ခြင်း ပိုတူတာပေါ့ကွယ်။ ကြင်ဖော်ကလည်းမဲ့၊ ပစ္စည်းဥစ္စာဓနကလည်းများတော့ ပိုင်ဆိုင်သမျှတွေကို လှူတန်းပေးကမ်းခြင်းဒါနအမှုနဲ့ပဲ ကုန်လွန်စေရတာပေါ့။ မနေ့ကတောင် သဂျီးတောင်းလို့ ရွာအလှူအတွက် ဒေါ်လာတသိန်းထည့်လိုက်ရသေးတယ်။ ပျင်းလို့ ဟောလိဝုဒ်မှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ရအောင်ကလည်း ရုပ်ရည်ရူပကာ ပြစားတယ်လို့ အပြောမခံနိုင်ပြန်ဘူး။ ဒီတော့ လုံးလေးရယ် ဦးကြောင်မပြောရဲတဲ့ စကားကို ပြောတယ်လို့ နားလည်ပြီး မြန်မြန်အဖြေပေးပါတော့။ ရင်ခုန်စွာဖြင့်…
ဒိန်းတပ်တပ် ပိစိညက် ဦးကြောင်ပက်လက် နတ်ပြည်တက် နတ်သမီးများနဲ့နှပ်။။
အောင်ကြူး ကတော့ ခက်ကပြီ။ သူများကဗျာ သန့်သန့်လေးကို ခံစားချက်တွေလျောက်ရောတယ်။ ၈တန်းကျောင်းသူလေးတောင် အမေကျေးဇူးကို ဒီလောက်သိတတ်နေရင် သူ့ထက်အသက်ကြီးသူတွေအားလုံး မိဘကျေးဇူးဆပ်နိုင်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။
ဒေါ်ရွှေအိရယ်.. အမေကပြောတယ် ဟဲ့ကောင် ကြောင်ကြီး နင့်ကို လောကအလယ်မှာ မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်နဲ့ မထားခဲ့ချင်ဘူးတဲ့။ ပြီးတော့ ငါလည်း မသေခင် မြေးချီသွားချင်ပြီတဲ့။ ကျုပ်အတွက် မပူပေါင်ဗျာ၊ အမေ့အတွက် အမေ့ကို ကျေးဇူးဆပ်ချင်လို့ပါ။ ဒေါ်ရွှေအိလည်း သူများကို လျောက်ဝေဖန်တာထက် မိဘကျေးဇူးဆပ်ဖို့ ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။ :neutral:
အောင်ကြူးပြောတဲ့ နည်းတော့ လက်တည့်မစမ်းရဲပေါင်တော်။ ကိုယ့်လစာထဲက နည်းနည်း များများ တတ်နိုင်သလောက်ပဲထောက်ပံ့ပီး ကုသိုလ်ယူပါတော့မယ်။
အေးအေး မောင်လေပွေရေ အဲလောက်နဲ့ ရပ်လိုက်တော့..။
မောင် ပြို ဆဲ ( လေ )
မင်းရဲ့ နောက်က တစ်ကောက်ကောက်လိုက်ရင်
ခြေလှမ်းလေး ရပ်လို့ 
ညီမလေး ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့ 